Temporal range: Oligocene အစောပိုင်းကာလ မှ Holocene ကာလ
Bradypus variegatus၊ ခွာသုံးခု ဆလောက်
Choloepus hoffmanni၊ ခွါနှစ်ခု ဆလောက်
ဆလောက် (အင်္ဂလိပ်: Sloth) သည် ပါဏဗေဒအရ 'အီဒင်တာတာ' မျိုးစဉ်ဝင် ဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် မျောက်နှင့်တူသည်။ တိုဝိုင်းသော ဦးခေါင်း၊ ကြီးသောမျက်လုံး၊ သေးငယ်သော နားရွက်တို့ရှိသည်။ သုန်သုန်မှုန်မှုန် နေတတ်သည်။ အမွေးများမှာ အလွန်ရှည်၍ ညစ်ပတ်ပေကျံလျက်ရှိ၏။ အမြီးဟူ၍ ပြောပလောက်အောင် မရှိချေ။ အရှေ့ ခြေထောက်တို့မှာ အနောက်ခြေထောက်များထက် ပို၍ ရှည်သည်။
ခြေထောက်ကြားတွင် ဦးခေါင်းကို လျှိုလျက် တစ်နေ့လုံး အိပ်နေတတ်၏။ သစ်ကိုင်းတွင် တွဲလွဲခိုနေသောအခါ အရွက်အလက်များနှင့် ရောထွေးနေသောကြောင့် ရုတ်တရက်မမြင်နိုင်ချေ။ ညအချိန်၌သာ တစ်ပင်မှ တစ်ပင်သို့ကူး၍ သစ်သီးများကို ရှာဖွေစားလေ့ရှိသည်။
ဆလောက်ကောင်သည် သစ်ပင်ပေါ်မှာမွေးပြီး သစ်ပင်ပေါ်မှာ ကြီးပြင်းလာရသောကြောင့် မျောက်ကဲ့သို့ပင် အခုန်အလွှားကျင်လျင်သည်။ မလွဲရှောင်သာသောအခါမှသာ မြေပေါ်သို့ ဆင်းလာသည်။ ခြေထောက်များမှာ မညီမညာရှိသောကြောင့် မြေပေါ်တွင် ခဲခဲယဉ်းယဉ်းလျှောက်ရသည်။ အမေရိကတိုက် အပူပိုင်းတောများ၌ ဆလောက် နှစ်မျိုးကို တွေ့နိုင်သည်။ တစ်မျိုးမှာ ခြေထောက်အားလုံး၌ ခြေချောင်းကလေး ၃ ချောင်းစီနှင့် ခြေသည်းကလေး ၃ ခုစီရှိသည်။ အခြားတစ်မျိုးမှာ နောက်ခြေ၌ ခြေချောင်းကလေး ၃ ခုရှိသော်လည်း၊ ရှေ့ခြေတို့၌ ၂ ချောင်းစီသာရှိသည်။ ဆလောက်ကောင်များသည် မြေပြင်ပေါ်တွင် အကူညီကင်းမဲ့လုနီးနီးရှိကြသည်။ သို့သော် ရေကူးတတ်ကြသည်။
↑ Gardner၊ A. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 100–101။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ "The evolution of armadillos, anteaters and sloths depicted by nuclear and mitochondrial phylogenies: implications for the status of the enigmatic fossil Eurotamandua" (in en) (2001-08-07). Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 268 (1476): 1605–1615. doi:10.1098/rspb.2001.1702. ISSN 0962-8452. PMID 11487408.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆလောက်ကောင်&oldid=725539" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။